Anticancer fanafody - Shijiazhuang Yiling Hospital
Sampan-draharaha & Expert
Aretina mitaiza & Expert
Fitsaboana kanseran'ny nono
Colorectal fitsaboana homamiadana
Prostate fitsaboana kanseran'ny
Fitsaboana homamiadana hafa
Ny tsindrona volamena
TCM Physical fitsaboana
TCM Athletic fanarenana
Zavatra dimy fitsaboana
Sakafo Shinoa fitsaboana
Health care fanafody
Rehefa avy Treatment
Ny solontena anti-homamiadana fitsaboana aretina tarihin'ny mianto-kevitra
1.National Medical Insurance Catalog
2.National patanty Drug
3. Ny Program no nanampy iray Grant avy ao amin'ny Vaovao ny Zava-mahadomelina Fikarohana Foundation panjakana misahana ny nentim-paharazana sinoa Medicine
Azo ampiharina ny fivontosana marary toy ireto manaraka ireto:
1.Improve kalitaon'ny fiainana Nilaza ho toy izany tumourous soritr'aretina araka nihena fahazotoan-komana, maloiloy, mandoa sy ny fahalemena
2.Taking aloha sy aorian'ny radiotherapy sy ny fitsaboana simika afaka mampihena ny paosin-vokany sy hanatsarana ny fitsaboana vokatry.
3.Applicable ny aloha sy aorian'ny fandidiana fivontosana sy ny fitsaboana eo amin'ny dingana fanarenana Hanatsara tsimatimanota, expedite famerenana ary ho maro surrival
Ahena Side-vokatry Hampitombo fitsaboana simika sy Taratra Effects
Voka fanehoan-kevitra niseho tamin'ny 26 marary rehetra 308 ao amin'ny vondrona Xiaoji Yangzheng nandritra fandinihana, ary niseho tamin'ny 9 marary rehetra amin'ny fanaraha-maso ny vondrona 104, izay amin'ny alalan'ny fitsarana dia ilaina ny andrana fanafody, ary tsy hisy vokany ny fitsaboana.
Nandritra ny fotoam-pitsarana pitsaboana, fandinihina tsara ny vokatry ny electrocardiogram, renal asa, manome urine sy fivalanana mahazatra fitsapana in YZXJ vondrona, tsy misy fanaraha-maso mazava fahasamihafana amin'ny vondrona; ny tahan'ny miseho abnormity vaovao dia lalina noho ny tahan'ny manova fenitra, izay amin'ny alalan'ny fitsarana dia ilaina ny fanafody.
Ny fampitahana ireo vondrona roa, 55 tranga dia mandaitra sy 8 raharaha dia inefficacious in YZXJ vondrona, ny fahombiazan'ny dia 87,3% ny tahan'ny, ary ny raharaha 37 sy 23 dia mandaitra tranga ireo amin'ny fanaraha-maso inefficacious vondrona, ny fahombiazan'ny dia 61,5% ny tahan'ny; mampitaha ny tahan'ny groups'efficacy roa, ny fahasamihafana dia mazava, P <0,05.
YZXJ capsule miaraka amin'ny interventional fitsaboana, mandray marary 123 havokavoka fivontosana ao amin'ny Meta sy tara dingana, ny fitsaboana ny fahombiazan'ny vondrona tahan'ny dia ambony noho ny hifehy vondrona, P <0,05. Nilaza ny fitsarana fa Yangzheng Xiaoji capsule nanana ny asa ny inhibiting homamiadana, ary ny asa amin'ny an-tsehatra synergistic fitsaboana simika; ny kalitaon'ny fiainana ao amin'ny vondrona YZXJ dia ambony noho ny hifehy ny vondrona, ary ny voka fanehoan-kevitra dia latsaka ny fanaraha-maso ny vondrona. Nilaza ny fitsarana fa afaka hampihena YZXJ capsule side-vokatra sy hampitombo tsimatimanota ny fitsaboana simika koa.
Manatsara Tumourous soritr'aretina Ampitomboy Quality ny fiainana
Manatsara Tumourous soritr'aretina Ampitomboy Quality ny fiainana Nampitaha vondrona roa 'fahombiazan'ny ny soritr'aretina, mampiasa laharana-vola fitsapana, Z = -4,060, P <0,001, ny fahasamihafana antontanisa nanana heviny; YZXJ vondrona dia ambony noho ny hifehy ny vondrona.
Ny soritr'aretina sy ny fahafenoany dia ahitana kibo distention, anorexie, spiritlessness sy ny fahalemena, fanaintainana sy ny fahalemena amin'ny andilany sy ny lohalika, mena fisotrony sy hamaha fipetrahany, tazo sy ny fanaintainana; rehetra voalaza eo ambony dia ho graded soritr'aretina ny hevitra. Lela vatana, sy ny samy hafa fiteny akanjo fitepon'ny fony dia hita ao amin'ny famantarana mason-tsivana ihany koa.
Mampitaha vondrona roa 'soritr'aretina aloha sy aorian'ny fitsaboana, mampiasa Mann-Whitney fitsapana, P> 0,05, vondrona roa dia ampy; mampitaha ny D-danja ny vondrona roa, mihoatra noho ny soritr'aretina 'P <0,05, ny fahasamihafana antontanisa nanana heviny; YZXJ vondrona dia ambony noho ny hifehy vondrona amin'ny fanatsarana ny soritr'aretina pitsaboana etsy ambony.
Yangzheng Xiaoji Capsule Markedly anaro fanaintainana ara-batana sy hampitombo hery
Yangzheng Xiaoji Capsule Markedly anaro Alimentary Canal Fihetsiky noho ny fitsaboana simika ny Zava-mahadomelina
Hatanjaho-kery fanefitra Andraikitra manakana Tumourous Fitomboana
Patient Atoa Yu, lahy, 62 taona
Aug 15 faha, 2005, toy izany ny soritr'aretina toy ny kohaka phlegm sy ny rany, fampahoriana amin'ny tratrany sy ny emaciation, amin'ny alalan'ny fitsapana CT ny A ambaratonga tany amin'ny kilasy fahatelo voan'ny hopitaly ny soritr'aretina toy ny kanseran'ny havokavoka havanana (pathologic aretina dia adenocarcinoma). Koa satria tsara pleural effusion, hetsika tsy misy, ary ny fifandraisana dia nilaza ny velona ihany no ho volana maromaro. Raha tsy misy ny radio sy ny fitsaboana chemo zava-mahadomelina, nitondra Yangzheng Xiaoji capsule, 4 capsules isaky ny fotoana, in-3 isan'andro, faha-14 Nov, 2005 (84-andro 'fitsaboana), sy mahafaka ny fahalianan'ny sy ny lanjan'ny nitombo sy ny hery ara-batana no kokoa; CT indray fitsapana: ny fivontosana shrunk amin'ny lafiny sasany sy ny tsara pleural effusion variana tanteraka.
Sep 15 faha, 2006 (13-volana 'fitsaboana), manam-paharetana ny fahazotoan-komana, ary ny lanjany ara-batana hery markedly nitombo, ary asa kely azo. Apr 15 faha, 2007, sy mahafaka ny fahalianan'ny dia ara-dalàna, azo lanjany sy asa isan'andro sitrana ny fenitra; CT fitsapana indray: tsy misy fahasamihafana mazava.
Fankatoavana No.】 【License-panjakana Drug Administration Z20040095
【Main Ingredients】 Radix Astragali, Fructus Ligustri Lucidi, Radix Ginseng, angano Holatra, Rhizoma Curcuma Phaeocaulis, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae (Mahatsiarova-vilany fandrahoana), Herba Hedyotidis Diffusae sns
【hita】 Fanamafisana tsimatimanota ary inhibiting fivontosana
【Clinical Applications】 ny fandraisana alohan'ny fandidiana dia afaka mampitombo ny tahan'ny fahombiazana ny hetsika. Expedite fanasitranana, mihena metastasis sy hisorohana ny tsy lavo indray taorian'ny fahombiazan'ny fiasan'ny Hampitomboina radiotherapy sy ny fitsaboana simika, hampihenana levitra fitsaboana simika, ary hampihenana ny lafiny-vokany. Manatsara fahazotoan-komana sy ny kalitaon'ny fiainana sy mahazo lanja ny palliative fitsaboana.
【Administration & levitra】 Raiso am-bava, 4 sy isaky ny capsules in-3 isan'andro
【famaritana】 0,39 g / capsule
【Package】 Aluminium-plastika fonosana 36 capsules / boaty, 400 boaty / baoritra
Fa ny fanontaniana momba ny fanafody sy ny fitsaboana manokana, Masìna ianao, avelao ny fifandraisana vaovao ho antsika Izy ary ho mifandray ao anatin'ny 24 ora.
Nanontany ny Treatment
Pitsaboana fandinihana ny 63 ahiahiana Case ...
Ruibing Lev, wenju Wang, Xin Li CR & WISCO General Hopitaly ao Wuhan University of Siansa sy ny Teknolojia, 209 metallurgical Avenue, Qingshan distrika, Wuhan 430080, faritanin'i Hubei, Sina [Abstract] Tanjona: Retros ...
Retrospective Clinical Analysis amin'ny Treatm ...
Yao Kai-tao1, Liu Ming-yu1, LI Xin2, HUANG Ji-han 3, CAI Hong-bin1 * (1.The Fahasivy Hopitaly ny Wuhan, Wuhan 430081, Sina, 2.CR & WISCO General Hospital, Wuhan 430080, Sina, 3 .Center for Zava-mahadomelina Clinical fikarohana, Shan ...
Pitsaboana fahombiazany Analysis tamin'ny 54 NCP ...
(Ny mpikambana ao Puren Hospital ny Wuhan University of Siansa sy ny Teknolojia, Wuhan 430081, Sina) Efa mahay Tanjona: handinika ny fahombiazan'ny Lianhua pitsaboana Qingwen Granules (LH-C) ao amin'ny tantara Coronavirus pneu ...
Vokatry ny Nentim-paharazana sinoa Medicine L ...
Cheng Dezhong 1, Wang Wenju 2 *, Li Yi1, Wu Xiaodong 2, Zhou Biao3 #, Mihirà Qiyong1 # 1 Puren Hospital mpikambana ao amin'ny Wuhan University of Siansa sy ny Teknolojia, Wuhan, 430081, PRC, 2 CR & WISCO General Hopitaly, Wuh. ..
Common soritr'aretin'ny nephrotic aretina
Misy be dia be ny proteinuria be dia be proteinuria no manan-danja indrindra fanehoana NS pitsaboana marary, ary izany koa no tena fototra pathophysiological mekanisma ny nephrotic aretina. A lehibe amoun ...